Shiinaha EVA Xumbo Buuxinaya Badeecadda Markabka Ilaalinta Markabka iyo alaab-qeybiyeyaasha. Haohang
Xumbo EVA Buuxisey Difaaca Markabka
1.Colorful. Naqshad aan macquul ahayn. 3.Can sidii usha sabbaynta oo badda ah. 4.Habacsan, kharash-badbaadin ah. 5.Wuxuu si buuxda ushaqeeyaa xitaa haduu maqaarku daloolmo. 6.Fudud si loo rakibo, loo dhaqaaqo loona isticmaalo. Dayactir yar.
Nooca noocan oo kale ah
Foornada xumbada ee loo yaqaan 'EVA foam' waa nooc ka mid ah dusha sare ee wax dhisaysa oo leh walxaha polyurethane sida lakabka difaaca ee sare iyo polyetylen ama udub-dhexaadka caagga ah ee sameeya qaybta gudaha ee adkeysiga leh
Iyada oo loo marayo cillad soo noqnoqod leh si loo nuugo saamaynta tamarta markabka ku jirta marka la isticmaalayo. Sidaas awgeed waxay yareyn kartaa saameynta halaagga ku yeelan doonta afaafka hore iyo markabka.
Foornada dul sabbaysa Polyurethane sidoo kale waa nooc ka mid ah dahaarka laysku cadaadiyo oo dhisaya banaanka lakabka difaaca ee leh qalabka polyurethan wuxuuna qaataa walxaha xumbada polyurethane ama balaastiig caag ah oo dhexdhexaad ah; saamaynta halaagga ah ee doomaha iyo maraakiibta ayaa noqon doona
hoos u dhigay by riixo si uu u nuugo saamaynta tamarta ka maraakiibta inta lagu guda jiro adoo adeegsanaya suunka dabaasha ee polyurethane.
Xumbo foornada badda ka buuxsamaysa ayaa nuugta saamaynta halka maqaarku iska caabiyo duugista iyo jeexjeexa xaalad kasta oo adag, sidaas awgeedna ku bixisa nidaam adag oo culus oo xeeladeynta badda ee dekedda, badda iyo codsiyada markab-doon.
Naqshad aan macquul ahayn
3.Can sidii usha sabbaynta oo badda ah
4.Habacsan, kharash-badbaadin ah
5.Wuxuu si buuxda ushaqeeyaa xitaa haduu maqaarku daloolmo
6.Fudud si loo rakibo, loo dhaqaaqo loona isticmaalo. Dayactir yar.
Foornooyinka xumbada laga buuxiyo ayaa ah waxqabad sare iyo nidaamka foorarka sabayn culus.
Xumbada xumbada ayaa laga sameeyaa maqaarka polyurethane elastomer (ama maqaarka caagga ah), lakabka xoojinta nayloon iyo xumbada adkeysiga u leh unugyada xiran.
Waxay leedahay nuugista tamarta sare iyo xoog falcelinta oo hooseysa.
Maxay macaamiisha u jecel yihiin inay doortaan Alaabtayada HAOHANG?
1. Qiimaha Lacagta, waxaad heli doontaa qiimaha ugu fiican ee ku saleysan tayada wanaagsan.
2. Khibrad aan lala tartami karin, waxaan balanqaadeynaa tayada wax soo saarka heerka koowaad iyo adeega.
3. Cimri nololeed wanaagsan iyo dammaanad tayo leh, badeecadeenu waxay leedahay nolol adeeg dheer oo loogu talagalay 10-15years.
Dhanka kale, waxaan haynaa muddo 3 sano ah oo ah dammaanad qaad tayo leh.
4. Adeeg xirfadle ah iibka kadib. Waxaan ka caawin doonaa macaamiisheenna inay xalliyaan su'aalaha badeecad kasta 24 saacadood gudahood.
5. Macaamiil ahaan, waxaan ku siin doonnaa qalab dayactir ah oo bilaash ah.
Hore: Mat-Rubbar Dabiici ah oo leh Dhar Taayir ah oo loogu talagalay sameynta Airbag
Xiga: Foomka Buufin lagu buufiyo Boobaska Tubbada Rubber ee Culvert
Barkinta Hawada Badda, Shiinaha Rubber Fender, Maraakiibta Tec, Fender Rubber, Boorsada Hawada ee Markabka, Block isku dhafan,